निर्वाचन धाँधलीरहित भयो, तल्लो तहमा नेकपा-कांग्रेस एकता देखियो : चौधरी | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार (Wednesday 3rd June 2020)
निर्वाचन धाँधलीरहित भयो, तल्लो तहमा नेकपा-कांग्रेस एकता देखियो : चौधरी
काठमाडौं, १६ मंसिर । राजपा नेपालकी महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य चन्दा चौधरीले मंसिर १५ गतेको उपनिर्वाचन धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न भएको भन्दै निर्वाचन आयोग, सरकार, सुरक्षा निकाय र आम मतदाताहरुलाई धन्यवाद दिएकी छिन।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी नेतृ चौधरीले भनिन्,‘यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो । कहीँकतै धाँधली भएन् । यो खुशीको कुरा हो । म निर्वाचन आयोगलगायत सम्बन्धित सबै निकायलाई यहाँबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
निर्वाचनमा हार/जित हुनु स्वभाविक भएको उनको प्रतिक्रिया छ । चौधरीले भनिन्,‘लोकतान्त्रिक देशमा निर्वाचनमा हार र जित हुनु स्वभाविक हो ।’ उनले कांस्की क्षेत्र नम्बर २ मा संघीय संसदको लागि भएको निर्वाचनमा नेकपाकी विद्या भट्टराईले जितेकोमा खुशी व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्,‘विद्याजीप्रति हाम्रो सहानुभुति थियो । उहाँले जित्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो चाहना थियो । नतिजा त्यही आयो, यो खुशीको कुरा हो ।’
केन्द्रमामात्रै नेकपा र कांग्रेसबीच सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध रहेको बताउँदै उनले यो पटकको उपनिर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा दुवै पार्टी मिलेको पनि टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्,‘महोत्तरीमा त कांग्रेस र नेकपाबीच आन्तरिक एकता देखियो । पिपरा गाउँपालिकामा त्यही देखियो । उहाँहरु जसरीपनि मधेशवादी दललाई हराउनैपर्छ भनेर लाग्नुभयो ।’
चौधरीले महोत्तरीको कतिपय वडामा कांग्रेसको पकड रहेको क्षेत्रमा पनि नसोचेको मत खसेको सुनाईन् । उनले भनिन्,‘जबकी पिपरा गाउँपालिका भनेको कांग्रेसको पकड क्षेत्र हो । त्यहाँ रामचन्द्र तिवारी, हरिशंक मिश्राजस्ता हस्तीहरु छन् । पिपरा गाउँपालिकामा कांग्रेसको १९ सयको हाराहारीमा मत खसेको छ । सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा त कांग्रेसको जम्मा २४ मत खसेको छ । यो विश्वास गर्ने मत नै होईन् । जबकी यो क्षेत्र कांग्रेसका गढ मानिन्छ ।’
नेतृ चौधरीले उपनिर्वाचनमा राजपा र समाजवादी पार्टीले चुनावी गढबन्धन नबनाएकोमा भने असन्तुष्टि पोखिन् । उनले भनिन्,‘यसअघि भएको प्रदेश र संघको निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरुले चुनावी गठबन्धन गर्नुभयो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन भनेर हो कि किन हो ? उहाँहरुले गठबन्धन वा तालमेल गर्नुभएन् । यो दुःखद् छ । पार्टी त हिजोपनि एकता थिएन, त्यतिवेला त गरियो नि ।’
बोर्डरमा नेपाली सेना पुग्नुपर्छ, अब सिधै एक्सनमा जानुपर्छ, ठोक्ने हो अहिले त : डा. अञ्जनीकुमार झा (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २१ जेठ । डा. अञ्जनीकुमार झाले नेपाल र भारतबीचको सिमा विवाद समाधानको लागि एक्शन
२३ सय कोरोना भाइरस संक्रमित को को (विवरणसहित)
काठमाडौ, २१ जेठ । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमित सख्या २३ सय पुगेको छ । जसमध्ये
थपिएका २०१ कोरोना संक्रमित को को (विवरणसहित)
काठमाडौ, २१ जेठ । देशमा कोरोना भाइरसका संक्रमित सख्या २३ सय पुगेको छ । स्वास्थ्य
कोरोना परिक्षण, क्वारेन्टाइन र डिस्चार्जको विवरण यस्तो छ
जेठ २१, काठमाण्डौ । नेपालमा अहिलेसम्म कूल २ लाख ६ सय ४६ जनाको कोरोना भाइरस
संविधान संशोधनमा दलहरुको एकपछि अर्को भाँजो, जनमोर्चाले गर्यो संघीयता खारेजीको माग
जेठ २१, काठमाण्डौ । सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा गरेसंगै संविधानको अनुसुचिमा रहेको निशान छाप परिवर्तन
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका ९ जना को को (विवरणसहित)
काठमाडौं, २१ जेठ । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ९ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य
कांग्रेसले भन्यो : ‘जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्ने तागेताको भद्र अवज्ञाको विकल्प छैन’
काठमाडौं, २१ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकराले यही जेठ २५ गतेभित्र विभिन्न
बाबुरामको अपिल : ‘कोरोना भाइरस र भोक भाइरस विरूद्धको लडाइँमा सबै एक होऊँ!’
काठमाडौं, २१ जेठ । समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विदेशमा
काठमाडौँ, २१ जेठ : महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट कोभिड–१९ लाई पराजित गरेर छ वर्षकी
२१ जेठ। पाकिस्तानमा कोरोनाभाइरस सङक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या